Mbappe Ayaa Real U Dhaqaaqaya Balse Shurruud Baa Ku Xiran – Garsoore Sports
Mbappe Ayaa Real…
Mbappe Ayaa Real U Dhaqaaqaya Balse Shurruud Baa Ku Xiran
Iyadoo Neymar uu dhowaan qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu kusii joogayo kooxda Paris Saint-Germain, waxaa la rajeynayey in kooxda reer Faransa ay sidoo kale sugi doonto wakhti dheeri ah oo ku aaddan adeega Kylian Mbappe.
Kooxda ka cayaarta Ligue 1ka dalka Faransiiska ayaa lugaha la geleysa dhammaadka isbuucan dhammaadka xilli ciyaareedka, iyagoo og in natiijo ay ka gaaraan Brest ay u baahan tahay inay ka fiicnaato natiijada Lille oo la cayaareeysa Angers.
Haddii kale, waxay ku dambayn doonaan kaalinta labaad, Inkastoo ay kamid yihiin kooxaha ugu qanisan adduunka ee haysta qaar kamid ah cayaartooyda ugu fiican dunidda, iyo horyaal ay tahay inay sannad kasta ku sharfaan ixtiraam si lamid ah sida kooxda Bayern Munich ay u sharafto Bundesligaha Jarmalka.
Waxaa macquul ah inay sabab u tahay guuldarradooda joogtada ah ee heerka Tartamada Yurub, si kastaba ha ahaatee, taasi waxay dhalineysaa inuu Kylian Mbappe riyadiisa ka dhabeeyo oo uu u dhaqaaqo kooxda Real Madrid.
Sida laga soo xigtay AS oo ay soo xiganeyso Football Espana, waxaa la rumeysanyahay in cayaaryahankan uu heshiis la gaaray Los Blancos, Iyadoo ay taasi jirto, PSG uma oggolaan doonto inuu Mbappe ka tago xagaagan.
Taa beddelkeed, warbixintu waxay soo jeedineysaa inay u ogolaan doonaan cayaaryahankan inuu si bilaash ah ugu tago kooxda sannadka dambe, marka xiddigo kale oo waa weyn sida Erling Haaland ay u badantahay in lasoo iib geeyo, kaasoo hubaashii ay u badantahay inay PSG dalab ka gudbineyso.
ISDHAAFSI: United Iyo Chelsea Oo Cayaaryahanno Usoo Bandhigay Spurs Si Ay U Helaan Kane
FIFA: Koobka Adduunka Labadii Sannaba Mar Ayaa La Cayaarayaa